ढिलासुस्तीको हटाउन? उपचार अवस्थित!
मान्छे को चालीस पचास वर्ष को पुस्ता को सबै भन्दा भाग को लागि शब्द "ढिलासुस्तीको" थाहा छैन। यो आवश्यकता को महामारीले को उपचार तपाईं आमाबाबुको सल्लाह सोध्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसैले, सधैं छ, नाम ढिलासुस्तीको ठंडे बस्ते। त्यहाँ धेरै साहित्यिक शब्द समस्या वर्णन गर्न पनि रूसी भाषा "dawdle"। ढिलासुस्तीको - यो भविष्यमा तनावपूर्ण अवस्था प्रदान गर्दछ कि फिर्ता बर्नर मा काम को स्थिर पछि सार्ने काम छ।
खाद्य र यसको प्रभाव
तर के गर्ने? कसरी ढिलासुस्तीको सामना गर्न? शक्ति परिवर्तन सुरु हुन्छ। खाना के गर्छ? तथ्यलाई तपाईं कार्बोहाइड्रेट र पर्याप्त छैन प्रोटिनको धेरै खान भने, तपाईं एक बिट निद्रा लागेको एक तनावमुक्त र र blissful हुनेछ भन्ने छ। ढिलासुस्तीको लागि आदर्श। तर पनि यो विश्राम विरुद्ध तपाईं पूर्ववत लाग्यो पीडा हुनेछ। त्यसैले तपाईं ढिलासुस्तीको हटाउन? उपचार - थप मासु, कम मिठाई र सह भोजन। कफी पिउने सम्भव र आवश्यक छ, तर चिनी बिना छ।
वा सबै के छैन?
अब, जब तपाईं राम्रो को लागि आफ्नो मस्तिष्क को जैव रसायन परिवर्तन, र तपाईं मामला बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। थप ठीक, को प्राथमिकता मा। ढिलासुस्तीको को सबै भन्दा तपाईं बस गर्न सक्छन् भन्ने छैन, र केहि गर्न कुराहरू धेरै मा सबै यो आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई आउँछ। कि म्याद आउँछ छ - र यो गर्न बाहिर जान्छ "सबै र थप एक सानो" आवश्यक थिएन। ढिलाइ को योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता र एक व्यक्ति relaxes discourages। इमानदार र समय मुर्ख जस्तै महसुस गरे जो कोहीले, गरेका गर्ने गरेको छैन कसैले - Artful Dodger। के गर्ने? अन्तस्करणले पीडा गर्न अवस्थामा बहुमत र लगाएको समाप्त हुनु गर्न छैन। निर्णय पेशा परिवर्तन: र स्थायी रूपमा तपाईं एक साँच्चै राम्रो भावना दिन हुनेछ, केही फेला पार्न!
ढिलासुस्तीको के हो? यसलाई निको पार्न असम्भव छ? सायद, तर यो तरिका तपाईं मात्र वृद्धि जागरूकता पास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं stimuli प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रोक्न आवश्यक, यो सोचाइ सुरु र irritants अनुरोध अस्वीकार गर्न, र वातावरण मा काम सुरु गर्न आवश्यक छ। यो भन्दा असहज हुनेछ जब तपाईं आफ्नो लक्ष्य मा काम गर्दै छन् भने, त्यसपछि तपाईं अन्य मानिसहरूको मात्र मोड बेच्न बाध्य हुनेछन्। र तपाईं आफैलाई लागि केही चयन गर्दा भन्दा पनि अधिक पन्छाउन चाहनुहुन्छ सक्छ।
कसरी ढिलासुस्तीको छुटकारा गर्न? तपाईं आफूलाई सेट गरेको लक्ष्य को धेरै उपयोगी सूची। कुनै कुरा के तपाईं तालिका पहुंच तिनीहरूलाई को, सबै भन्दा गर्छन्। तर तिनीहरूलाई एक नजर तपाईं लगाएको लक्ष्य को कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ के को लागि ध्यान र सम्झना गर्न, मद्दत गर्नेछ। निस्सन्देह, आदर्श, सबै लक्ष्य तपाइँको, दूर जाने र ढिलासुस्तीको हुन त गर्नै पर्छ। यो अवस्थाको उपचार आन्तरिक विरोध काम गरेर मात्र सम्भव छ। मानिस केवल गर्न चाहनुहुन्छ जब राख्छ। तपाईं कम्तिमा नकारात्मक भावनाहरू आफ्नो अवचेतन देखि "कांडा" प्राप्त अनुभव गर्न जीवन व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
ढिलासुस्तीको पनि सञ्चालनको एउटा नयाँ प्रकारको भय संग जोडिएको छ। उहाँले तपाईंलाई के कसरी, र यसैले सिकाउन सक्षम हुनेछ चिन्ने मान्छे संग सम्बन्ध निर्माण गर्न लड्न सक्नुहुन्छ। कसरी त्यस्तो मानिसहरूलाई उपयोगी हुन थाहा! र त तपाईं राम्रो को लागि परिवर्तन को लागि धेरै गर्न।
व्यक्तित्व लक्षण - यसको विशेषताहरु को लागि एक उपकरण
बीउ देखि बढ्दै delphinium
म कसरी शरीरको तापमान छिट्टै कम गर्न सक्छु
छत लागि पीवीसी प्यानल। केही तथ्य
लुगा मा साम्राज्य शैली - एक सूक्ष्म अनुग्रह